Accueil > Gazetin'ny nosy > INTY SY NDAY : Tsy mbola ahitam-pahombiazana
INTY SY NDAY : Tsy mbola ahitam-pahombiazana
Roa volana latsaka kely izao no nijoroan’ny governemanta Ntsay Christian. Governemanta izay nohirahiraina fa hiantoka ny fikarakarana ny fifidianana. Efa nomarihina teto fa raha ny lafiny teknika amin’ny resa-pifidianana dia efa ny Vaomieram-pirenena mahaleo tena momba ny fifidianana no tompon’andraikitra amin’izany. Ka amin’ny maha-rafitra mahaleo tena ny Ceni dia tsy misy antony tokony itenenana fa ny governemanta dia hikarakara fifidianana.
Raha ny marina dia ny vola enti-miatrika ny fifidianana no avy amin’ny governermanta amin’ny maha-volam-bahoaka ny hikarakarana azy io, fa tsy midika izany fa manana andraikitra amin’ny fikarakarana ara-teknika ny fifidianana ny governemanta.
Mampalahelo moa fa ny anaran’ny Ceni fotsiny no mipoapoaka hoe “mahaleo tena” fa ny ankapobeny dia tsy ananany izany fahaleovan-tena izany.
Noho izany, ny andraikitra andavanandron’ny governemanta, ankoatra ny raharaham-pifidianana ihany izany no tokony iantsorohany ka itarafana raha mamely na tsia, raha mahomby na poaka aty.
Voalohany amin’izany ny fifehezana ny tsy fandriam-pahalemana. Milaza ny iaraha-mahita sy iaraha-miaina izahay fa tsy ahitam-pahombiazana aloha hatreto ny governemanta momba an’io. Na asan-dahalo na asan-jiolahy isan-karazany.. dia mbola ny omaly tsy miova ihany, mba tsy hitenenana hoe vao mainka miha-ratsy. Tokony mba nisy vokatra azo notarafina na kely aza fa hatreto dia tsy hita izany.
Fifehezana ny fidangan’ny vidim-piainana. Zovy no tsy mikaika momba azy io fa tsy nahavita nifehy azy io ny governemanta Ntsay Christian aloha. Lasa fampielezan-kevitra ankolaka ho an’ny Hvm sy ny Tim ilay tsy fahombiazana amin’izany. Vao mainka mantsy manaka-danitra. Ny vidim-bary no mba nihena saingy efa tamin’ny naha-minisitry ny Varotra an’i Sabani Nourdine io, izay azo ambara koa fa nateraky ny fiakaran’ny voka-bary teny amin’ny tantsaha. Ny ankoatra ny vary dia io iaraha-miaina io.
Ny fitakian’ny mpiasa etsy sy eroa dia karazany famonoana afo peta-toko ihany no hita taratra fa tsy vahaolana maharitra. Ny fitokonan’ny mpampianatra, ohatra, dia noteren-komasaka toa voalobo-jaza ny raharaha satria hoe “efa manakaiky ny androm-panadinana”. Izany hoe atao vonjy tavanandro toy ny mamonjy taovan-kena izany ny raharaham-panabeazana ka ny fanadinana no mahamaika na poaka aty aza ny lohan’ny mpianatra?
Ny ao amin’ny ministeran’ny Vola dia tsy mbola hita taratra ny fandraisan’ny governemanta fanapahan-kevitra hentitra amin’ny alalan’ny fandraisana didim-panjakana mivantana, na ny momba ny Ametis na ny resaka GasyNet.
Ny eo amin’ny ministeran’ny Paositra sy Fifandraisan-davitra dia fifanarahna peta-toko koa no namerenana niasa ny mpiasa, toy ny hoe “tsy hisy ny fandroahana ny mpiasa nitokona”. Ny fototr’aretina tsy hita fanafana.
Ny fifehezana ny kolikoly izay mamotika ny firenerna dia fihetsiketsehana ivelany ny betsaka fa tsy hita taratra any anivon’ny raharaha an-davanandron’ny vahoaka any izany, indrindra fa ny “kolikoly avo lenta” any ambony any.
Ny fandrobana ny harem-pirenena koa dia tsy ahitana taratra izay mba ezaka na fepetra noraisin’ny fitondram-panjakana ny fifehezana azy.
Maroloha e! Hatramin’ny fiahiana ny vondrom-bahoakam-paritra itsinjaram-pahefana sy ny fampihodinana ny raharaha any no tsy tena ahitana vahaolana misongadina fa tena ny omaly tsy miova hatrany e! Governemanta toa tsy mahavita na ny fampihodinana ny raharaha an-davanandron’ny vahoaka aza e!
Ilàna fieritreretana izany.